BARNAAMIJYO | HOYGA WARARKA CAALAMKA | Page 2
Beelaha Biimaal iyo Habargidir” Maxay ku heshiiyeen?
Muqdisho:- Shir socday afar maalmood oo Go”aan looga gaarayay colaada ka taagan magaalada Marka iyo qeybo ka mid ah Gobolka Shabeellaha Hoose ayaa shalay lagu soo gaba gabeeyay magaalada Muqdisho. Dhex dhaxaadintaan oo garwadeen ka aheyd AMISOM iyo Maamulka Koofur Galbeed ayaa waxaa heshiis ka kooban afar qodob lagu kala dhex dhigay beelihii muddooyinkii u dambeeyay ku dagaalamayay magaalada Marka ...
Shir Wadatashi ah oo maanta ka furmaya Gobolka Sool
Gobolka Sool:- Deegaanka Balli-Cad ee Gobolka Sool waxaa ku Sugan maamulka Khaatumo oo uu horkacayo Madaxwayne Cali Khaliif Galaydh, Deegaanka Balli-Cad ee Gobolka Sool waxaa maanta si rasmi ah uga furmaya shir uu maamulka Khaatumo shalay jimcadii iclaamiyay oo sabtida maanta ka furmi doona deegaankaas sidaasi waxaa Tabiyenews.com u xaqiijiyay Wasiirka Arrimaha Gudaha Khaatumo, Abshir C/casiis. Wasiirku wuxuu tilmaamay in ...
Wasiir Hadliye” oo Khudbad Soomaaliya uu kaga hadlayo ka jeedin Doona Fadhiga QM
New York :- Wasiirka Arrimaha Dibadda Soomaaliya C/salaan Hadliye Cumar ayaa maanta lagu wadaa inuu khudbad ka jeediyo Fadhiga Golaha guud ee loo dhaqan yahay Qaramada Midoobey oo ka socda magaalada New York ee dalka mareykanka. Madaxweyne Xasan Sheekh oo waqtigiisa dhamaaday ayaa isu diyaarinaya tartan doorasho, isagoo doonaya inuu mar kale ku guuleysto xilka madaxweynaha. Wasiir Hadliye ayaa jeedinaya ...
Kenya oo Sheegtay in ay kordheen weerarada Al-Shabaab
Kenya:- Dowladda Kenya ayaa waxa ay tilmaamtay in ay bilaabayso howgal cusub oo ay kula dagaalamayso ururka Al-Shabaab ka dib markii ay kordheen weerarada ay ku qaadayaan gobolka Waqooyi Bari ee dalka Kenya. Taliyaha Ciidanka ammaanka dalka Kenya ayaa sheegay in ciidanka ammaanka ay bilaabeen howlgal ka dhan Al-Shabaab oo laga sameyn doono xuduudka u dhaxeeya labada dal. Taliyaha ayaa ...
Iska hor imaad Qasaare geystay oo ka dhacay Magaalada Jowhar
Jowhar:- Inta la xaqiijiyay 2 askari oo ka tirsan ciidanka dowladda Soomaaliya ayaa ku dhintay halka sidoo kale ay dhaawacmeen 4 qof oo isgu jira askar iyo shacab kadib markii Iska hor imaad geystay khasaare kala duwan ayaa xalay ciidamo ka tirsan dowladda Soomaaliya waxa uu ku dhexmaray magaalada jowhar ee xarunta gobolka Shabeelaha Dhexe. Dadka jowhar kusugan ayaa Tabiyenews.com ...
‘QORMO’ Makala guur baa Mise waa barrin rogasho !!!?
‘QORMO’ Makala guur baa Mise waa barrin rogasho !!!? Waxaan in muddoo ahba maqlayaa, dalka waxuu ku jiraa kala guur !! Waxaan garan la’ahay ma anigaan aqoon afkii hooyo, mise wax badan baa iska beddeley afkeenni intaan dalka debeddiisa ku maqnaa?? Waxaan siyaasiyiinta ka maqlaa ayaga oo leh , dalka waxuu ku jiraa kala guur,taasi oo jahwareer gelisey fekerkeyga, oo ...
Wasiir Odawaa” oo been ka sheegay Dhismaha Maamulka Hiiraan iyo Sh/dhexe
Cadaado:- Wasiirka Arrimaha Gudaha iyo Federaalka ee Xukuumadda Soomaaliya C/raxmaan Maxamed Xuseen (Odawaa) oo ku sugan magaalada cadaado ayaa waxa uu sheegay in meel wanaagsan uu marayo maamulka loo dhisayo Gobolada Hiiraan iyo Shabeellaha Dhexe. Wasiir Odawaa oo ka hadlayay magaalada Cadaado ayaa sheegay inay ku rajo weyn yihiin in maalmaha soo socda in magaalada Jowhar ka soo baxo Maamul ...
Al-shabaab oo Askar Kenyan ah ku soo bandhigay Gobolka jubada Dhexe
Jilib:- Wararkii ugu dambeeyay ee naga soo gaaraya degmada Jilib ee gobalka Jubbada Dhexe, waxa ay sheegayaan in halkaas lagu soo badhigay askar iyo gaadid dagaal oo Shabaab ay ka soo afduubteen Tuulo u dhow Magaalada Gaarisa. Dadka deegaanka ayaa waxa ay inoo sheegeen in ururka Shabaab maanta fagaaro ku yaala degmada jilib ku soo ban dhigeen gaadidka iyo askarta ...
Siyaasiga Salaad Cali Jeelle oo Afka Furtay Tolow Muxuu yiri!
Muqdisho:- Siyaasiga Salaad Cali Jeelle oo ka mid ah isbaheysiga Xisbiyada siyaasada ee mucaaradka ah ayaa sheegay in amarada xilligan ka soo baxaya Madaxda dowladda aanay aheyn kuwo shaqeynaya, isagoo ka digay in dalka fowdo lagu geliyo. Salaad Cali Jeelle ayaa sheegay in waqtiga dowladda uu dhamaaday, isla markaana warqadaha sida gaar gaarka uga soo baxaya Madaxda dowladda aanay aheyn ...
Dowladda Kenya ” Xubno ka tirsan Al Shabaab ayaan gacanta ku dhignay
Kenya:- Booliska Dalka Kenya ayaa gacanta ku dhigay 3 Ruux ku sugnaa Magaalada Gaarisa kuwaasi oo doonayay in ay yimaadaan Dalka Soomaaliya, si ay ugu biiraan Xarakada Al Shabaab. Xeer Ilaaliyaha Dalka Kenya ayaa ku eedeeyay dhalinyaradan in ay ka mid yihiin Xarakada Al Shabaab, islamarkaana sharciga la waafajin doono. Saraakiisha Booliska ayaa sheegay in Raggan ay qorsheenayeen in tababaro ...